China 50D ANEROID SPHYGMOMANOMETER ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | အရှေ့တိုင်း
Aneroid sphygmomanometer ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
၁) ။ RAPPAPORT STETHOSCOPE နှင့်အတူ
2) ။ အထူးလူမီနီယမ်အလွိုင်း manometer
၃) D-ring နှင့်နိုင်လွန် cuff ထွန်းလင်း
၄) 2- ပြွန်အရွယ်ရောက်အရွယ်အစား PVC ဆီးအိမ်
၅) စံ PVC မီးသီး
အမျိုးအစား Rappaport Stethoscope နှင့်အတူ Sphygmomanometer Kit
manometer အထူးလူမီနီယမ်အလွိုင်း, မော်ဒယ်: 1019
cuff D-ring, မော်ဒယ်နှင့်အတူနိုင်လွန် Cuff Shinning
Cuff အရောင် optional ကို (အနက်ရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အပြာ၊ ခရမ်းရောင်)
ဆီးအိမ် 2- ပြွန်အရွယ်ရောက်အရွယ်အစား PVC ဆီးအိမ်
မီးသီး စံ PVC မီးသီး
Air-release Valve လျင်မြန်စွာ deflation များအတွက်တွန်းအားပေး, တိကျသော deflation များအတွက်ဝက်အူ
အဆုံး Valve Taper Metal Net End Valve (ဖုန်စစ်ထုတ်စက်)
Stethoscope ရောင်စုံ Rappaport Stethoscope
အိတ် Shinning နိုင်လွန်သယ်ဆောင်အိတ်
၆) deflation အဆို့ရှင်: 'မြန် Push'for
deflation, အတိအကျ deflation "screw'for
၇ ။ Taper သတ္တုအသားတင်အဆုံးအဆို့ရှင် (ဖုန်မှုန့်စစ်စက်)
၈) ရောင်စုံ rappaport stethoscope
၉) နာမည် tag
1pcs / အရောင်သေတ္တာ;
30pcs / ပုံး
အီး, ISO, FDA, RoHs နှင့် BHS နှင့် EHS ။
က။ အာမခံကာလအတွင်း sphygmomanometer သည်လူမဟုတ်သောအချက်များကြောင့်ပျက်စီးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာရှင်မှအတည်ပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားကောင်းမွန်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပို့ပေးနိုင်ပြီးသင်၏ ultrasound ကိုဗီဒီယို၊ Skype၊ Whatsapp နှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ နောက်တစ်မျိုး ထပ်မံ၍ စက်ထဲသို့ထပ်မံပို့ပေးပါ။
1.Top အရည်အသွေး: ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ရှိပြီးဈေးကွက်တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။
2.Excellent ၀ န်ဆောင်မှု - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်ဆက်ဆံပြီးရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
3.OEM လက်ခံသည်။ ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။
4.Unbeatable စျေးနှုန်း: ငါတို့အစဉ်အမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကျိုးခံစားရဖို့မြင့်မားသောစျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သေချာ။
5. အချိန်မီ Delivery: သင်၏အမိန့်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တင်ပို့ရလိမ့်မည်။
6. ပြီးနောက် - ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှု: ထုတ်ကုန်အားလုံးတစ်နှစ်အာမခံရှိသည်။
ရှေ့သို့ Oriented Soft-Touch ဘေးကင်းလုံခြုံရေး Lancet
နောက်တစ်ခု: LCD display ဒီဂျစ်တယ်လက်တွေ့သာမိုမီတာ
80D FINGERTIP Pulse OXIMETER
F01L လက်ညှိုးимпульс OXIMETER
201Y shock ခံနိုင်ရည် SPHYGMOMANOMETER
80B လက်ညှိုးထိုးသွေးကြော OXIMETER